Mayelana NATHI - Global ARCH
Global ARCH / Inkampani
Umnqopho we-Global Alliance yeRheumatic and Congenital Hearts (Global ARCH) ukwenza ngcono imiphumela yokuphila emhlabeni wonke ezifweni zenhliziyo eziqala ebuntwaneni ngokunika amandla izinhlangano zeziguli nezomndeni. Ubulungu bukhululekile futhi buvulekele kunoma yiliphi iqembu elikhonza iziguli zenhliziyo ezizelwe kanye / noma ze-rheumatic nemindeni yazo. Umfelandawonye wethu uhlanganisa izinhlangano ezivela emhlabeni wonke ukuze zifunde, zisebenzisane, futhi zikhulume ndawonye ngezidingo ezingagcwaliseki zalabo abaphila nezimo zenhliziyo eziqala ebuntwaneni.
Siyaxhuma futhi siqinise Isifo senhliziyo esizelwe emhlabeni wonke kanye nezinhlangano zesifo senhliziyo esibizwa nge-rheumatic ngokusebenzisa ukuqeqeshwa kontanga, ukuthuthukiswa kobuholi, izinsiza zemfundo, nezingqungquthela zesifunda nezomhlaba jikelele.
Siyakhuluma ngamalungelo esifo senhliziyo azalwe naso kanye neziguli zenhliziyo i-rheumatic ngokusebenzisa i Umkhankaso Wamalungelo nangokukhuthaza nokuxhasa ukwethulwa kweziguli nokuholwa ngumndeni
Siyafundisa iziguli, ochwepheshe, kanye nezinhlangano zosizo ngezidingo zomhlaba wonke zesifo senhliziyo esizelwe kanye neziguli zenhliziyo i-rheumatic kanye nezinkinga ezibaluleke kakhulu emiphakathini yethu.
Siyabambisana nezinhlangano ezinolwazi nezokusiza ukuze zinikeze usizo olungcono kuwo wonke umuntu othintekayo yisifo senhliziyo esiqala ebuntwaneni.
I-Global Alliance Yezinhliziyo Zamathambo Nezelwe (Global ARCH) kwaqala ngeqembu elinombono wezifo zenhliziyo ezizelwe kanye nabaholi besifo senhliziyo i-rheumatic, ngamunye ethinteka ngqo yisifo senhliziyo esiqala ebuntwaneni. Babelane ngombono wokuguqula isifo senhliziyo esizelwe emhlabeni wonke kanye nemiphumela yesiguli senhliziyo yenhliziyo ngokunika amandla izinhlangano eziholwa iziguli nezomndeni.
Ehlobo lika-2017, babiza eyokuqala Ingqungquthela Yamazwe Ngamazwe Yobuholi Benhliziyo (ICHLS), okuhlanganise izifo ezingama-30 zesifo sokuzalwa kanye nabaholi besifo senhliziyo i-rheumatic abamele amazwe angama-21 kumazwekazi ayisithupha. Ukuze kwakhiwe izwi eliqine egameni lesifo senhliziyo esizelwe kanye neziguli zenhliziyo nesifo samathambo, ababambiqhaza bavumelane ngazwi linye ukuthi basungule inhlangano entsha, ezimele engenzi nzuzo ebizwa ngeGlobal Alliance for Rheumatic and Congenital Hearts (Global ARCH). Umbono ohlangene we Global ARCH ukwenza ngcono nokwelula impilo yazo zonke izingane zenhliziyo nabantu abadala - noma ngabe bazalelwaphi.
Yabelana ngaleli khasi